ဘယျလောကျ စားစား သှယျလသြော ခန်ဓာကိုယျပိုငျရှငျ ဖွဈခငျြ တယျ လို့ ဆုတောငျးလိုကျတဲ့ ပိုပို – Let Pan Daily
ခဈြစရာကောငျးတဲ့ အဆိုတျောမလေးပိုပိုကတော့ အဆိုပိုငျး မှာလညျး ကြှမျးကငျြသလို ဘာသာရေးကိုလညျး အလေးထားတဲ့သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ မကွာခဏဆိုသလို ဆှမျးလောငျးလှူဖွဈတဲ့အလှူလေးတှကေို ပရိသတျတှကေိုမြှဝပေေးလရှေိ့သူပါ။
အခုလညျးဆှမျးလောငျးဖွဈတဲ့အလှူလေး ကိုပရိသတျကိုမြှဝေ ရငျး ဆုတောငျး လိုကျတာဖွဈပါတယျ။
သူ့ရဲ့ဖဘှေ့တျချမှာ “ယနေ့ ငါးကွငျးနဲ့ မြှဈခဉျြ ဂျေါဖီကွျော ငါးခဉျြသုတျ ဆနျ ၂ လုံးနီးပါး ခကျြလှူပါတယျရှငျ့…. ဒါန ပွီးတော့ ငါးပါးသီလ ဆောကျတညျပါမယျ…. ယနပွေု့ရ ကုသလ ကွောငျ့ လူခဈြလူခငျပေါမြားပွီး ဘေးရနျအသှယျသှယျတို့မှ ကငျးဝေးပါရစဘေုရား… သူတျောကောငျးမြားနဲ့ သာတှဆေုံ့၍ စိတျခမျြးသာရပါစဘေုရား နောကျဆုံး ဆုတောငျးကတော့ ဘယျလောကျပဲ စားစား သှယျလသြော ခန်ဓာကိုယျပိုငျရှငျဖွဈပါရစဘေုရား” ဆိုပွီးတော့ အလှူဒါနပွုတဲ့ပုံရိပျလေးတှနေဲ့အတူ ရေးသားထားတာပါ။
ပိုပိုကတော့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှလေုပျပမေဲ့ ခန်ဓာကိုယျ တညျဆောကျပုံအရ သှယျသှယျ လလြလြေးမဖွဈတာကွောငျ့ သှယျလတြဲ့ သူတဈယောကျဖွဈခငျြတဲ့သူပါ။ အခုလညျး သှယျလတြဲ့ခန်ဓာကိုယျဖွဈပါစဆေိုပွီး ဆုတောငျးနတောပါတဲ့နျော…
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အဆိုတော်မလေးပိုပိုကတော့ အဆိုပိုင်း မှာလည်း ကျွမ်းကျင်သလို ဘာသာရေးကိုလည်း အလေးထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏဆိုသလို ဆွမ်းလောင်းလှူဖြစ်တဲ့အလှူလေးတွေကို ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးလေ့ရှိသူပါ။
အခုလည်းဆွမ်းလောင်းဖြစ်တဲ့အလှူလေး ကိုပရိသတ်ကိုမျှဝေ ရင်း ဆုတောင်း လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ “ယနေ့ ငါးကြင်းနဲ့ မျှစ်ချဉ် ဂေါ်ဖီကြော် ငါးချဉ်သုတ် ဆန် ၂ လုံးနီးပါး ချက်လှူပါတယ်ရှင့်…. ဒါန ပြီးတော့ ငါးပါးသီလ ဆောက်တည်ပါမယ်…. ယနေ့ပြုရ ကုသလ ကြောင့် လူချစ်လူခင်ပေါများပြီး ဘေးရန်အသွယ်သွယ်တို့မှ ကင်းဝေးပါရစေဘုရား… သူတော်ကောင်းများနဲ့ သာတွေ့ဆုံ၍ စိတ်ချမ်းသာရပါစေဘုရား နောက်ဆုံး ဆုတောင်းကတော့ ဘယ်လောက်ပဲ စားစား သွယ်လျသော ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါရစေဘုရား” ဆိုပြီးတော့ အလှူဒါနပြုတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ ရေးသားထားတာပါ။
ပိုပိုကတော့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပေမဲ့ ခန္ဓာကိုယ် တည်ဆောက်ပုံအရ သွယ်သွယ် လျလျလေးမဖြစ်တာကြောင့် သွယ်လျတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့သူပါ။ အခုလည်း သွယ်လျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပါစေဆိုပြီး ဆုတောင်းနေတာပါတဲ့နော်…